सर्वोच्च अदालतले आरक्षणसम्बन्धी साउन १७ गते दिएको फैसला सच्याउन नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघले माग गरेको छ। उक्त फैसला विगतमा भएका आन्दोलन, संविधानमा उल्लेखित समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै जनजाति महासंघले सच्याउन माग गरेको हो।
यहाँको मोलुङ गाउँपालिका १ कुन्तादेवीका आगलागी पीडित ५ परिवारका लागि आवास निर्माणको काम शुरु भएकोछ । प्रदेश सरकारको सहयोगमा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत कुन्तादेवीको डुलडुलेका अग्नी पीडितको घर एक कार्यक्रमकावीच शुरु भएको हो ।
पिके सोलुखुम्बु टाप्टिङ समाज सेवाले १० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री गाउँ पठाएको छ । स्वास्थ्य सामाग्री र औसाधी ब्यवस्थापन गरी सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा न १० टाप्टिङ पठाएको हो ।
चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम स्व. आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ । आ.व. २०७८।०७९ को बजेट वक्तव्यमा शेर्पाको नामबाट विमानस्थल नामकरण गरिने उल्लेख गरेको हो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, ओखलढुंगा शाखाले भवन निर्माणका क्रममा सहयोग गर्ने सहयोगीदाताहरुलाई सम्मान गरेको छ । राजधानीमा एक समारोह आयोजना गरि सहयोगीदाताहरुलाई सम्मान गरेको हो ।